ချင်းတွင်းမြစ်ပေါ်တွင် တရုတ်နှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ ဖက်စပ်၍ ထမံသီ ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ခြင်းကို ကူကီး တိုင်းရင်းသားများက အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့တွင် ၂၀ဝ၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့က ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြနေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
တရုတ် လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ တရုတ်ဘဏ်တွေဟာ အာရှနဲ့ အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ သဘောထားတွေကို ဥပေက္ခာပြုပြီး ဆည်နဲ့ ရေကာတာလုပ်ငန်းတွေမှာ ဝင်ရောက် အားပေး ပါဝင်နေကြောင်း၊ ဒီစီမံကိန်းတွေမှာ လူအများအကြား ပွင့်လင်းမှုနဲ့ တာဝန်သိမှု လိုအပ်တာကို သိပေမဲ့ ကိစ္စ အတော်များများမှာ လိုက်နာ ကျင့်ကြံတာ မရှိတာ တွေ့ရကြောင်းလည်း အဖွဲ့ရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ Peter Bosshard က တရုတ်နိုင်ငံ ဘီဂျင်းမြို့ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်အသင်းမှာ ဧပြီ ၂၀ ရက် မနေ့က ပြောကြားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဟာ ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ရေးတွေကို လုပ်ဆောင်နေပြီး ဒေသခံပြည်သူတွေအကြား စိတ်ဝမ်းကွဲစေတဲ့ စီမံကိန်းတွေမှာ ငွေကြေးအကုန်ကျခံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ နေကြောင်း၊ ဒီဒေသတွေမှာ မြန်မာစစ်တပ်က လယ်ယာမြေသိမ်းယူတာ၊ ကျေးရွာတွေကို အတင်းအကျပ် ရွှေ့ပြောင်းတာတွေလည်း ရှိကြောင်း၊ ဒီလို အတင်းအကျပ်လုပ်တဲ့အတွက် ဒေသခံတွေအနေနဲ့ တရုတ် အကူအညီနဲ့ စစ်တပ်က တဆင့်ကဲ အာဏာပြလာတယ်လို့ ခံစားလာရတဲ့ အတွက် ဆိုးဝါးတဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်လာစေကြောင်းလည်း အဖွဲ့ရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ Mr Bosshard က ပြောကြားပါတယ်။
Chinese is already in top, and they are trying to build China asathe greatest green nation while they are ruing others country ecology. Burma is facing dangerous position on environmental protection.
Apr 21, 2011 02:13 PM